प्रचण्डले सीतालाई सोधे चिन्यौनी तिमीले ? देउवाले भने- म शेरबहादुर (भिडियोसहित) – Halkhabar kura
५ श्रावण २०७८, मंगलवार २०:३१
प्रचण्डले सीतालाई सोधे चिन्यौनी तिमीले ? देउवाले भने- म शेरबहादुर (भिडियोसहित)
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा खुमलटार पुगेर भेटेका छन् । देउवा प्रचण्ड पत्नि सिताको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न आएको प्रचण्डको सचिवालयले जानकारी दियो । सिता केही समय अघिदेखि विरामी छिन् ।
सितालाई देख्ने बित्तिकै देउवाले नमस्कार गरे । प्रचण्डले सितालाई सोधे- चिन्यौ नि तिमिले । देउवाले भने- म शेरबहादुर । सिताले मधुरो स्वरमा भनिन्- चिनेँ । प्रचण्डले फेरि सितालाई भने- आरजू पनि आउनुहुन्छ तिमिलाई भेट्न । प्रचण्डकी छोरी गंगाले थपिन- आउछु भन्नु भएको छ । सिताको कमजोर स्वास्थ्य अवस्था देखेपछि देउवाले नियालेपछि प्रचण्डले भने- यस्तो भेटघाटपछि उनको मनोबल अलि बढ्दो रहेछ ।
‘तपाईंलाई कस्तो छ? तपाईंलाई नै म यहाँ भेट्न आएको,’ प्रधानमन्त्री देउवाले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ पत्नी सीता दाहालसँग हालखबर सोधे। जवाफमा अशक्त प्रचण्ड पत्नीले टाउको हल्लाइन् मात्र। उनका रसिला आँखा नमस्कार गरिरहेका प्रधानमन्त्री देउवाको अनुहार निर्निमेष रोकिए।
हालखबर सोधपुछका क्रममा प्रचण्ड पुत्री गंगा दाहालले आफ्नी आमाको स्वास्थ्य अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री देउवालाई छोटो ‘ब्रिफिङ’ गरेकी थिइन्। भनिन्, ‘आमाको स्थिति यस्तै छ, औषधि पनि चलिरहेको छ।’
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड निवासमा प्रधानमन्त्री देउवाको उपस्थितिमा प्रचण्ड सचिवालयले पारिवारिक भेटघाट भनेको छ। ‘प्रधानन्त्री देउवाले सीता दाहालको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिन चाहेकाले यो भेटघाट भएको हो’, प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटाले भने, ‘उहाँले यसबारे पहिल्यैदेखि बुझ्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो।’ यद्यपि, देउवा र प्रचण्डबीच खुमलटारमा राजनीतिक विषयमा पनि कुराकानी भएको बताइएको छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउबाबीच मंगलबार मात्रै यो दोस्रो भेट हो। बिहान मात्र उनीहरुबीच झण्डै एक घण्टा भेटवार्ता भएको थियो। त्यसअघि प्रचण्डले एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निवासमा जनता समाजावदी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेता नेपालसँग पनि राजनीतिक छलफल गरेका थिए।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार बर्हिगमन र शेरबहादुर देउवाको सत्तारोहणपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दिनहुँजसो राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त छन्।
प्रचण्ड निवास खुमलटारको भेटवार्तामा दुई नेताहरुबीच वर्तमान मन्त्रिमण्डल विस्तार र गठबन्धनका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड निकटस्थहरूका अनुसार उनले गठबन्धनका नेताहरूसँग मूलतः तीन विषयमा कुराकानी गरिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाले पुनःस्थापित सदनको पहिलो दिन अर्थात् आइतबार विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि प्रचण्डले समसामयिक विषयहरुप्रति अरु बढी चासो देखाएका हुन्।
प्रचण्डले खासगरी, मन्त्रिपरिषद विस्तार, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र जसपा तथा एमालेभित्रको समीकरणबारे बढी चासो राखिरहेका छन्।
Previous भीम रावलको राजीनामा रोक्न १२ सांसदसहित १७ जनाको टोली काठमाडौँमा
Next अध्यक्षबाट ओलीलाई फालेर साविककै एमाले हाक्ने माधवपक्षको तयारी, होला त सफल ?